Soshiki Karate 組織 空手 (松濤館) ကရာတေး: What isaScientific Hypothesis and THEORY? What is the connection between THEORY and PRACTICE? စာတွေ့ Theory နှင့် လက်တွေ့ Practical တို့သည် အပြန်အလှန် လွန်စွာအရေးကြီးလှပါသည်။
“ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ “ဆိုသောစကားအရ စာတွေ့ Theory နှင့် လက်တွေ့ Practical တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်၊ မှီခို၊အကျိုးပြုလျက် ရှိပါသည်။ ၂ မျိုး စလုံး ပြည့်စုံကျွမ်းကျင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကရာတေးပညာတွင် သာမက ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး အပါအဝင် ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးတို့တွင်အပြန်အလှန်
Whether the chicken / hen (or) the egg came FIRST!